नेपाली सेना पाकिस्तानी मोडेलमा सञ्चालन गर्न खोजिएको आशंका » खबरहरुको एउटै केन्द्र
नेपाली सेना पाकिस्तानी मोडेलमा सञ्चालन गर्न खोजिएको आशंका
मंगलवार, श्रावण ३, २०७४ १५:४१ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ: नेपाली सेना आफैँले देशभरी अलग्गै रेडियो सञ्चालन गर्न लागेको छ । त्यसका लागि सरकारले लाइसेन्स दिइसकेको छ । १०१.६ मेगाहर्जको सैनिक रेडियोको परीक्षण प्रसारण डोटीको दिपायलबाट आरम्भ सुरु भइसकेको छ ।
उपत्यकासहित देशका छवटा पृतनाबाट छवटा रेडियो स्टेसन सञ्चालन गर्न सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति लिई सकिएको छ । सैनिक प्रवक्ता झंकर कडायतले अरु ठाउँमा पनि सञ्चालनका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
नेपाली सेनाले रेडियो सञ्चालन गर्न हुन्छ की हुन्न ? अहिले बहसको विषय बनेको छ । भोलि सेनाले ‘कू’ गर्न आफ्नो रेडियोलाई परिचालन गर्यो भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । यसले सेना र सरकार अलग भएको स्थापित गर्न खोजिएको विज्ञहरुको तर्क छ ।
यो संगै नेपाली सेना पाकिस्तानी मोडेलमा सञ्चालन गर्न खोजिएको त होइन ? चर्चा-परिचर्चा सुरु भएको छ । पाकिस्तानी सेनाले ४९ वटा रेडियो स्टेसन सञ्चालन गरिरहेको छ । उत्तरकोरिया, थाइल्यान्ड र चीनमा पनि सेनाले मिडिया सञ्चालन गर्छ ।
नेपाली सेनाले सेनासँग जोडिएका गतिविधिसँग मात्रै रेडियो जोडिने भएकाले कुनै शंका नगर्न भनेको छ । तर, सूचना लिने निकायले नै सूचना दिन थालेपछि देशको लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने केहि विज्ञहरुको दाबी छ । मडियाले नेपाली सेनालाई स्थान नदिएका कारण छुट्टै रेडियो नै सञ्चालन गर्न लागिएको सेनाले तर्क गरेको छ ।
सरकारले सेनालाई लाइसेन्स किन दियो ? माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै सेनालाई लाइसेन्स दिएकाले त्यसमा थप रहस्यका रुपमा हेरिएको छ । हिजो जनयुद्धमा माओवादीले रेडियोलाई टुल्स बनाएको थियो अहिले सेनालाई त्यस्तै टुल्स बनाऊ भनिएको हो ? माओवादी केन्द्रत्रि नै प्रश्न खडा भएको स्रोतले जनायो ।
PREVIOUS POST Previous post: थाईल्याण्ड भ्रमण लगत्तै देउवा सरकार छोड्ने प्रचण्डको चेतावनी
NEXT POST Next post: दक्षिण कोरियाको वार्ता प्रस्तावको उत्तरले जवाफ दिएन
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, श्रावण ३, २०७४ १५:४१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, श्रावण ३, २०७४ १५:४१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, श्रावण ३, २०७४ १५:४१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, श्रावण ३, २०७४ १५:४१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, श्रावण ३, २०७४ १५:४१